Photicon inotsiva icon yeiyo Mifananidzo app neyekupedzisira kutora yatakatora (tweak) | IPhone nhau
Zvekare isu tinotaura nezve anonakidza tweaks ari kuuya kune imwe nzira Cydia application chitoro. Pakutanga ini ndakakuzivisa nezve yekuda kuziva OnceMore, iyo tweak iyo inotibvumidza isu kudzora kuverengera kweyedu iPhone yakanangana nekiyi yekuvhara, ichitibvumidza kuiseta kana kuimisa tisina kuwana iyo iPhone. Ino nguva tinotaura nezve tweak iyo inotibvumidza kuti tishandure icon yeiyo Photos application, chiratidzo chinoshanduka zvinoenderana nezvatakatora needu smartphone, nekuti ichatiratidza iyo yekupedzisira thumbnail kutora yatakatora neyedu mudziyo. Zvakanaka kurangarira kuti ndeipi yekupedzisira kana kungo gadzirisa yedu vhezheni yeIOS.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vanofarira kuchinja mifananidzo yezvimwe zvikumbiro pasina kuenda kune akasiyana madingindira anopiwa nejailbreak, ichi chingave chimwe chezvi tweaks iwe zvaunoda kuti upedze yako muunganidzwa. Sezvo isu tichiona mumufananidzo uyo musoro wechinyorwa ichi, iyo Photos application icon inotitaridza kubatwa kwekupedzisira kwatakaita pasina chero mhando yemhedzisiro. Kana mhedzisiro yarinotipa isingagutsi kana isu tisingade vamwe vanhu vanogona kuwana iPhone yedu kuti vaone kuti yedu yekupedzisira yakatorwa chii, tinogona kuwedzera mhedzisiro inoshatisa mufananidzo weiyo icon.
Iko kunyorera kunotipa isu zvakasiyana mhedzisiro yekuisvibisa, kubhowa kwatinogona kuwedzera kana kudzikisa. Asi zvakare inotibvumidza kuseta dambarefu kubva kwatinoda kuti mufananidzo uratidzwe mukushandisa kuti uwane, Yakanakira avo vashandisi avo vanofarira kugara vachiratidza mufananidzo wemhuri yavo, sekureba sekunge makaiswa mune inoenderana album. Photicon inowanikwa kuti utore mahara kuburikidza neimwe nzira Cydia app chitoro uye inoenderana senge yeiyo iOS 9.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Photicon inotsiva iyo Icon yeapp mifananidzo neyekupedzisira kutora yatakatora (tweak)